🥇 Chirongwa chekuchinjisa mazino
Chiyero: 4.9. Nhamba yemasangano: 462
Vhidhiyo yechirongwa chekushandisa otomatiki kwemazino
Ronga chirongwa chekushandisa otomatiki kwemazino
Dentistry otomatiki iri kukura nekukurumidza nekuda kwekuwanikwa kwemichina yekushandisa. Chirongwa chemazino otomatiki, inova imwe yehunyanzvi nzira dzekugadzirisa mazino senge mhando yenzvimbo yechiitiko chebhizinesi, inoshandiswa zvakare, asi zvirinani zvisingawanzo. Unogona kuwana makopi asingawanzo ehurongwa hwemazino einternet paInternet, asi ese acho angangoda kubhadhara nguva dzose kuti ubvumidzwe kushanda mairi, kana kungoshaya mashandiro akawandisa ayo munhu angade kuwona mune application seizvozvo. Kusarudzika kune zviri pamusoro apa USU-Nyoro - chizvarwa chitsva chemberi dentistry otomatiki chirongwa. Iyo USU-Soft yakabatanidza zvese maficha izvo vanamuzvinabhizimusi vangave vanofara kuona mune iyo otomatiki ekurapa mazino. Iyo chirongwa chezvemazino otomatiki chiri nyore kushandisa uye haigadzike pamwedzi zvinodikanwa zvemari yekunyorera kuti ishande mairi. Iyo dentistry automation chirongwa chinoshanda kunyangwe pane yakapusa kumba komputa uye hapana hunyanzvi michina inodikanwa kwairi. Tsime remabasa ibhenefiti yakakura, nekuti chirongwa chemazino otomatiki chinogona kuwana nzira yekushanda kwechero kiriniki yemazino uye kuunza otomatiki nenzira yayo. Nerubatsiro rweiyo dentistry automation chirongwa, iwe unodzora vashandi 'maawa ekushanda, kuita musangano nevarwere, kudzora mushonga, kuverenga mari yekupa sevhisi, uye iwe zvakare shanda nemitengo yakawanda yemitengo uye akasiyana mapoka evatengi ku kamwe.
Iyo USU-Soft dentistry automation chirongwa haidi zvakawanda kubva pakombuta yako uye inoda imwe chete nzvimbo yekugona kushanda zvinobudirira. Uye iwe unogona kusevha ruzivo sekopi yekuchengetedza pane yakajairwa USB drive, kuitira kuti kana chimwe chinhu chikaitika, iwe utore nyore nyore ruzivo rwako. Zvakare, chirongwa chezvemazino otomatiki chinotaurirana nevanyori vezvemari, maprinta emarisiti, ayo, zvakare, anobatsira zvakanyanya kukurumidza kwebasa nevatengi uye anotendera iwe kuti uvape gwaro remari sechibvumikiso chekubhadhara masevhisi. Nerubatsiro rweUSU-Soft chirongwa chemazino otomatiki, iwe unogadza kutonga uye kuenzanisa masangano ebasa mashandiro ayo chaizvo anoshanda mune mota. Panguva imwecheteyo, kushanda nevarwere kunova nekukurumidza zvakanyanya, zvichikubvumidza iwe kupa masevhisi kune vanhu vazhinji. Izvi zvinokutendera iwe kukura kuva mutungamiri pakati pevakwikwidzi uye kuwana yakawanda yakawanda mari.
Kuti uite sarudzo yekushandura kiriniki, iwe unofanirwa kuziva nezve mabhenefiti ekushandisa aya matekinoroji. Isu tinonyora, mumaonero edu, mabhenefiti makuru (ehupfumi nezvimwe) izvo kiriniki yemazino kana nzvimbo yekurapa inogona kuwana kubva mukumisikidzwa kweiyo otomatiki manejimendi chirongwa chemazino otomatiki. Aya mabhenefiti anogona kuiswa muzvikamu zvinotevera zvinotevera zvezvinetso. Chekutanga pane zvese, iko kubviswa kana kuderedzwa kwekutyisidzira kune bhizinesi nevashandi vasina hunhu (kuendeswa kwevarwere kunorapwa kurapwa kune mamwe makiriniki, kupihwa kwemumvuri masevhisi, kuraswa kwezvinoshandiswa). Chechipiri, iko kurangwa kwemari kwevarwere (sekuratidzira kwazvinoita, mukushayikwa kwekutonga kwakakodzera kubva kuhutongi, kusabhadharwa kwevarwere kunogona kukonzera kukuvara kwemari kukambani) .Chitatu, kuwedzera kwekupinda kiriniki nevarwere kuburikidza nekushingaira shanda nevatengi dhatabhesi (bvunzo dzekudzivirira, kufona kuti urambe uchirapwa); kuderedzwa kwevarwere vasingaendi kuburikidza nefoni uye maSMS zviyeuchidzo
Kazhinji vanachiremba mumakiriniki havadzore muripo wevarwere, vachisiya hana yehutongi. Izvi zvinogona kupembedzwa, sezvo chiremba achifanira kunyanya kufarira kurapwa kwacho. Iyo komputa chirongwa chezvemazino otomatiki chinokutendera iwe kunyatso tarisa pasi vane chikwereti, uchivayeuchidza nezvechikwereti chavo pane anotevera murwere kushanya, uye chengeta nguva yetemu yezvirongwa zvavo zveinishuwarenzi. Ungazvidzivirira sei kubva pakurasikirwa? Chirongwa chemazino otomatiki chinogona kukuyeuchidza nezvechikwereti kwete chete panguva yekunyoreswa kweanopihwa masevhisi, asiwo panguva yekusvika kwemurwere kana kunyangwe panguva yekunyoreswa kwemurwere muchirongwa. Izvi zvinobvumira maneja kuyeuchidza murwere nezvechikwereti munguva, uye pamwe achidzosera mamwe mabasa anodhura kusvikira chikwereti chabhadharwa. Iyo yakakosha module ('Kushambadzira') inokutendera iwe kuti uite sarudzo yevakwereta kuti ushande pamwe navo chaizvo kuvhara chikwereti. Iyo USU-Soft chirongwa chemazino otomatiki anoyeuchidza nezve zvakapera zveinishuwarenzi zvirongwa.
Isu tinopa iyo yepamusoro multifunctional chirongwa icho chinogadzirisa ese mativi ekiriniki yemazino uye zvese izvi pamutengo unodhura. Iyo USU-Soft application ine yakachipa-inodhura software ma module emhando yepamusoro ayo anogona kumisikidzwa musarudzo kana zvichidikanwa. Iwo ma module anotengwa kamwe chete uye zve ese uye hapana mari yekumanikidza yekubhadhara.
Iyo USU-Soft application inogona kunzi yepasirese, sezvo ichigona kugadziridzwa kune chero bhizinesi. Isu takaongorora zvirongwa zvakawanda zvakafanana, takatarisa zvikanganiso zvinoitwa nevazhinji programmers uye togumisa kuti system yedu inofanira kunge iri nyore sezvinobvira, kuitira kuti basa rekushanda mariri rive nyore uye risanyanya kuomarara. Nekuda kweizvozvo, iwe unowana iyo sisitimu iyo inogona kuita kuti mashandiro ekushanda ave nani, neiyo nyowani mhando yekumhanyisa uye kurongeka. Kugona kwekushandisa hakugone asi kukushamisa iwe nesimba re automation yetekinoroji yazvino. Iwo chete matekinoroji epamberi anogona kuvimbisa budiriro yekusimudzira kwekambani yako.